sex machine gun – MM Online Shopping
ဝကျ​အူ​ခြောငျး ၁​ခြောငျးအတှကျ​နဲ့ ဝကျ​တဈ​​ကောငျ​လုံးဝယျ​စရာမလို​တော့ပါ ဤစကျ​ရှိရငျ​ ပွီးပွညျ့​​စုံ​စပေါတယျ​ အမြိုးသမီးမြားအတှကျ​ အထူး Special ထုတျ​ထားတဲ့ စကျ​ဖွဈ​ပါတယျ​
​ယောကြားတဈ​​ယောကျ​ကို​ချေါထားတာထကျ​​ပိုပီး​တော့စှမျး​ဆောငျ​​ပေးနျို​ငျ​ပါတယျ​ ​ယောကျ​ကြားကသာကွာရငျ​ အားကုနျ​မယျ​​မောပနျးမယျ​ ​ဆေးဝယျ​တိုကျ​ရမယျ​ ​စရိတျ​​တှပေိုကုနျ​ပါတယျ​ စကျ​က​တော့ သ​ဘောရှိ မ​နောရှိ non stop လုပျ​​ပေးနိုကျ​တယျ​​နှျော​
​ရှေ့​ကော​နောကျ​​ကော သုံးလို့ရပါတယျ​ ကြားတု size ၃မြိုးပါပါမယျ​ ကိုကွိုကျ​တဲ့ size ကို ​အသုံးပွလို့ပါတယျ​ နူးညံ့ အိစကျ​တဲ့ အသား​တှေ ဖွဈ​တဲ့ အတှကျ​ မနာကငျြ​​စပေဲ ခံစားမှု အပွညျ့​ကိုရရှိ​စမှောပါ စကျ​ကို အနိမျ့​အမွငျ့​ အတိုး ​အ​လြှော့ ပွုလုပျ​လို့ရမဲ့ အတံ​တှပေါပါတယျ​
အနိမျ့အမွငျ့ လိုသလို့ ခြိနျညှိလို့ရပါတယျ .လိုသလို့ဆှဲယူနိုငျသော bracket ပါရှိသောကွောငျ့ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ အမွငျ့နဲ့ရှုထောငျ့ကို ညှိလို့ရသောကွောငျ့ ပုံစံအမြိုးမြိုး စိတျကွိုကျခြိနျညှိလို့ရပါတယျ .
အရညျအသှေးမွငျ့အငျဂငျြစကျကို အသုံးပွုထားသောကွောငျ့ စှမျးဆောငျရညျကောငျးမှနျပါတယျ .. မျောတာရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကွောငျ့ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ အမွနျနူနျးကို ကိုယျစိတျကွိုကျခြိနျညှိနိုငျပွီး အထှဠျအထိပျကို ရောကျစပေါတယျ ..
အသုံးပွုနညျး အညှနျး .
ကြားတုကို စကျရဲ့ ခေါငျးမှာတပျပါ ၊ ခေါငျးတှငျ pin ပေါကျ ၃ပေါကျပါပါတယျ အဲဒီအထဲကို ထိုးထညျ့ပေးပါ .
အားသှငျးပလပျနဲ့ တိုကျရိုကျ join ပွီးသုံးပါ.
အားသှငျးကွိုးမှာပါတဲ့ စကျဝိုငျးကို လှညျ့ပွီး အဖှငျ့ အပိတျ အတိုးအလြှော့ လုပျနိုငျပါတယျ .
ကြားတု နောကျတမြိုးနဲ့လဲရာတှငျ စကျတှငျရှိသော အထဈလေးကိုဖိပွီးတော့ ဖွုတျတပျလုပျပါ .
အသုံးမပွုခငျ ကြားတုတှငျခြောဆီ လိမျးပေးပါ.
အသုံးပွုပွီးနောကျ ရဖွေငျ့ သခြောသနျ့စငျဆေးကွောပေးပါ ။ ထိုနောကျ အေးမွပွီး သနျ့ရှငျးသော နရောအတှငျ အခွောကျခံထားပေးပါ.
ကလေးမြားနှငျ့အဝေးတှငျ ထားပါ လုံခွုံသခြောစှာ သိမျးဆညျးထားပေးပါ .
မှတျခကျြ အသုံးမပွုခငျနှငျ့ အသုံးပွုပွီးတိုငျးတှငျ ရနှေငျ့ alcohol ပါသော သနျ့စငျဆေးရညျဖွငျ့ သခြောဆေးကွောပေးပါ.ထိုနောကျ အခွောကျခံပေးပါ.
ကှနျဒုံးဖွငျ့ အသုံးပွုပါက ပိုအဆငျပွပေါတယျ.
၀က်​အူ​ချောင်း ၁​ချောင်းအတွက်​နဲ့ ၀က်​တစ်​​ကောင်​လုံးဝယ်​စရာမလို​တော့ပါ ဤစက်​ရှိရင်​ ပြီးပြည့်​​စုံ​စေပါတယ်​ အမျိုးသမီးများအတွက်​ အထူး Special ထုတ်​ထားတဲ့ စက်​ဖြစ်​ပါတယ်​
​ယောကျားတစ်​​ယောက်​ကို​ခေါ်ထားတာထက်​​ပိုပီး​တော့စွမ်း​ဆောင်​​ပေးနို​င်​ပါတယ်​ ​ယောက်​ကျားကသာကြာရင်​ အားကုန်​မယ်​​မောပန်းမယ်​ ​ဆေးဝယ်​တိုက်​ရမယ်​ ​စရိတ်​​တွေပိုကုန်​ပါတယ်​ စက်​က​တော့ သ​ဘောရှိ မ​နောရှိ non stop လုပ်​​ပေးနိုက်​တယ်​​နှော်​
​ရှေ့​ကော​နောက်​​ကော သုံးလို့ရပါတယ်​ ကျားတု size ၃မျိုးပါပါမယ်​ ကိုကြိုက်​တဲ့ size ကို ​အသုံးပြလို့ပါတယ်​ နူးညံ့ အိစက်​တဲ့ အသား​တွေ ဖြစ်​တဲ့ အတွက်​ မနာကျင်​​စေပဲ ခံစားမှု အပြည့်​ကိုရရှိ​စေမှာပါ စက်​ကို အနိမ့်​အမြင့်​ အတိုး ​အ​လျှော့ ပြုလုပ်​လို့ရမဲ့ အတံ​တွေပါပါတယ်​
အနိမ့်အမြင့် လိုသလို့ ချိန်ညှိလို့ရပါတယ် .လိုသလို့ဆွဲယူနိုင်သော bracket ပါရှိသောကြောင့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အမြင့်နဲ့ရှုထောင့်ကို ညှိလို့ရသောကြောင့် ပုံစံအမျိုးမျိုး စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိလို့ရပါတယ် .
အရည်အသွေးမြင့်အင်ဂျင်စက်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပါတယ် .. မော်တာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အမြန်နူန်းကို ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်ပြီး အထွဠ်အထိပ်ကို ရောက်စေပါတယ် ..
အသုံးပြုနည်း အညွှန်း .
ကျားတုကို စက်ရဲ့ ခေါင်းမှာတပ်ပါ ၊ ခေါင်းတွင် pin ပေါက် ၃ပေါက်ပါပါတယ် အဲဒီအထဲကို ထိုးထည့်ပေးပါ .
အားသွင်းပလပ်နဲ့ တိုက်ရိုက် join ပြီးသုံးပါ.
အားသွင်းကြိုးမှာပါတဲ့ စက်ဝိုင်းကို လှည့်ပြီး အဖွင့် အပိတ် အတိုးအလျှော့ လုပ်နိုင်ပါတယ် .
ကျားတု နောက်တမျိုးနဲ့လဲရာတွင် စက်တွင်ရှိသော အထစ်လေးကိုဖိပြီးတော့ ဖြုတ်တပ်လုပ်ပါ .
အသုံးမပြုခင် ကျားတုတွင်ချောဆီ လိမ်းပေးပါ.
အသုံးပြုပြီးနောက် ရေဖြင့် သေချာသန့်စင်ဆေးကြောပေးပါ ။ ထိုနောက် အေးမြပြီး သန့်ရှင်းသော နေရာအတွင် အခြောက်ခံထားပေးပါ.
ကလေးများနှင့်အဝေးတွင် ထားပါ လုံခြုံသေချာစွာ သိမ်းဆည်းထားပေးပါ .
မှတ်ချက် အသုံးမပြုခင်နှင့် အသုံးပြုပြီးတိုင်းတွင် ရေနှင့် alcohol ပါသော သန့်စင်ဆေးရည်ဖြင့် သေချာဆေးကြောပေးပါ.ထိုနောက် အခြောက်ခံပေးပါ.
ကွန်ဒုံးဖြင့် အသုံးပြုပါက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်.
Categories: Dildo ကျားတုများ, For Women, Sex Accessory
his product contains:
Host, accessories shown on the photo, power supply (local standard plug)
Size: 36.5cm * 15cm * 24cm
Pushing speed: 1-10 times per second (၁စက္ကန့်ကို ၁ကနေ ၁၀ အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် )
Power supply voltage: 100V – 240V
Governor voltage 9V-24V
Unisex: This sex machine is suitable for men and women。
Angle: Multi-angle expansion, with retractable brackets, you can adjust the height and angle at will, and you can easily enteravariety of postures. You can adapt to the most comfortable sexual posture according to the actual situation.
Engine: This product usesadedicated high-performance engine, which is powerful and does not haveacard machine phenomenon. The performance motor has stepless speed change and instant climax.
The first step; insert the penis connector into the hole in the head of the machine (3 pin holes), and then jam the cover
Step 2: Insert the transmission round plug into the machine and plug the power plug into the socket.
Step 3: Turn the button clockwise to turn it on and accelerate, turn counterclockwise to decelerate to off
Note: When replacing the prosthetic penis, press the baffle to pull out, do not pull hard
1. It is recommended to use lubricating oil or water-based lubricant before use.
2. Wash with water after use, dry and put in cool and ventilated place
3. Keep away from children, avoid exposure, and avoid volatiles
4. Recommendation: Wash the product with water and neutral detergent or medical alcohol before and after each use, and dry it. For health and hygiene, it is recommended to use with condoms.
Be the first to review “sex machine gun” Cancel reply
dildo 00 12
Dildo 00 16 ကျားတုရိုးရိုးအကောင်းစား
Ks60,000.00 Add to cart
Dildo 007 ..အားသွင်း